China YX-150 mpanamboatra sy mpamatsy | Yixin
Ny andian-tsarimihetsika YX-150 toerana misy milina fantsom-pifandraisana mandeha ho azy dia mety amin'ny pipelines ambonin'ny DN114mm sy ny hatevin'ny rindrina mihoatra ny 5mm. Raikitra ny fantsom-pandehanana ary ny lohan'ny welding dia mandady irery mba hahitana tariby mandeha amin'ny toerana rehetra (welding 5G).
Ny fizotran'ny fantsom-panafody dia mampiasa lasitra miaro tena mahomby, mora vidy CO2 miaro vy, ary ny tariby mifehy dia mety ho voasivana matevina na hozatra. Ny lohan'ny welding dia manintona amin'ny fantsom-pandrefesana, ary ny masontsivana fantsom-batana dia alefa tsara amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra hifehezana mba hifehezana ny lohan'ny welding mba hikira ho azy eo amin'ny fantsona.
◆ Fantsona azo ampiharina: karazana fantsona lava fitaterana lava, fantsom-pizarana hafanana, fantsona ambanin'ny tany, fantsom-pandrosoana ary sns, mety amin'ny fantsona eny an-toerana.
□ Weldable azo ampiharina: savaivony ny savaivony mihoatra ny 150mm, hatevin'ny rindrina mihoatra ny 8mm, fantsona matevina azo fehezina mifanaraka sy satroka.
◆ lohan'aratra: mora entina sy entina, entina manintona maharitra ary azo ampiharina amin'ny milina mandeha ho azy eo an-toerana.
◆ Voafehy lavitra: Mametraha sy mifehy ny mason-tsivana amin'ny lavitra, mora ianarana ary miasa miaraka amin'ny hamafin'ny asa ambany.
◆ Fahombiazana avo lenta: welding tsara sy fotoana ambany kokoa 3-4 heny noho ny fantsom-panafody arc.
◆ Kalitao avo lenta: ny lasera dia manana endrika bika, tsy misy porosina, fampidirana ny slag, tsy fisian'ny fusion ary fika hafa. Ny kalitaon'ny fikajiana dia tsara, ary ny tahan'ny fahitana ny lesoka ultrasonic dia mihoatra ny 97%. Mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsapana ny tsindry na ny fiatraikany, ny fihenan-tsofina, ny fanondrahana ary ny fizahana toetra mekanika hafa.
* Fiarovana amin'ny entona: 100% CO2 / 80% Ar + 20% CO2
* Magnetika voadoka
* lanja: 11kg
KEMPPI 500A famatsiana herinaratra
* Famatsiana herinaratra KEMPPI X3
* Andiany telo 380V ± 15%
* Tariby azo ampiharina: Wire matevina / Flux cored Wire
* Wire-cored Wire Dia: 1.0mm / 1.2mm
Fanaraha-maso tsy misy tariby
* Mora ampiasaina
* Fanaraha-maso feno
TOSIKARAT miasa Misy laharana tady DC12-35V Normal: DC24 Misy laharana ： ＜ 100W
Range ankehitriny 80A-500A
Hafainganam-pandom-basy 0-100 Manohy manitsy
Welding swing Swing Width 2mm-30mmMitohy manitsy
Fotoana havia 0-2sMba manohy manitsy
Fotoana mety 0-2sMba manohy manitsy
Hafainganana 0-99 （0-750） mm / min
Diameter Pipe azo ampiharina Mihoatra ny DN150mm
Hatevina rindrina azo ampiharina 8mm-50mm
Fitaovana azo ampiharina Carbon vy, vy tsy misy fangarony, vy firaka, vy ambany maripana, sns. (Lalana vita amin'ny vy tsy voatanisa)
Andalana azo ampiasaina Ny karazana fantsom-pantsaka isan-karazany, toy ny fantsom-pipa amin'ny fantsom-boaloboka, fantsom-boribory fantsom-boaloboka, fantsom-flange fantsona, (raha ilaina dia raiso ny fifandraisan'ny tetezamita)
tariby welding （φmm） 1.0-1.2mm
Size （L * W * H） Head welding 302x140x120mm
Milanja （KG） Head welding 11kg
Fanamafisana ny tanana Fanamafisana mandeha ho azy
Teo aloha: YX-150 PRO